Tenda kuti hapana chinogoneka. - Asingazivikanwe - Quotes Pedia
Tenda izvozvo hapana chinhu chisingagoneke muhupenyu. Ehe, vanhu vanga vachibudirira nhasi vasvika kune kwavo kwakananga chete nekuda kwekuti havana kukanda mapfumo pasi. Vaive nekutenda kwakazara kugona kwavo, uye vakaramba vachishanda nesimba kuti vazviite.
Ziva kuti budiriro haina kumbouya kune chero munhu usiku. Zvinotora ziya neropa kupupurira kubudirira, uye uyo anoteerera pane izvo chokwadi kuravira zvibereko zvekubudirira rimwe zuva.
Kuti ubudirire muhupenyu hwako, zvisinei kuti ndeipi nzvimbo kana munda urimo, iwe unofanirwa kutenda muchokwadi chekuti 'hapana chinokona!'
Chete kana iwe uchitenda kuti zvese zviri mumaoko ako iwe unonyatsovimba nekugona kwako pachako, uye izvo zvinopedzisira zvichikutungamira kuenda kunzvimbo yekubudirira munguva pfupi inotevera. Iwe haugone kubudirira nhasi chaiko, asi kana iwe uine chinangwa chekusvika, uchafanirwa kuramba uchifamba wakanangako.
Dzimwe nguva, tinotya kufamba nekungoona zvipingaidzo zvinouya nenzira yedu kuti tibudirire. Iwe haufanire kunge uri iwe uri kudaro!
Ziva kuti iyo nzira yekubudirira haife yakatsetseka zvakakwana! Iwe uchafanirwa kutsungirira kuoma kwese, uye chete kana iwe uchinge wakunda izvo zvese zvipingaidzo, iwe unozogona kusvika kune chako chinangwa
Kazhinji kazhinji, vanhu vanoneta kuenda kuburikidza nezvipingamupinyi izvi, uye ndipo pavanowanzo gamuchira kutadza. Ziva kuti kubudirira hakusi kwekutadza kakawanda; izvi ndezve paunenge uchiramba kusimuka.
Iwe unogona kutakura akaoma matambudziko, asi iwe unofanirwa kugara wakasimba mukati! Ramba uchipfuura nemuzvipingaidzo izvi, uye shinga uye tarisa kune chako chishuwo. Kana iwe wakazvipira kubasa rako, hapana chinogona kukukunda.
Izvo zvakakosha kuti unzwisise kuti hapana chinhu pasi pano chisingagone, uye avo vabudirira nhasi vapfuura neese ega ezvikamu izvi vasati vanyatso kubudirira.
Nekudaro, iwe hausi wakasarudzika nemukana chero upi. Zvese zvaunoda kuti unzwisise kuti yega yeiyi mhinganidzo inoitirwa kukudzidzisa iwe chidzidzo uye kukupa iwe kana zvimwe zviitiko.
Ramba uchifamba, uye usambobvuma kukundikana. Zuva raunenge wagadzirira kugamuchira chokwadi ichi, uchave uchakwanisa kubudirira.
Ingobvumidza chero rudzi rwekuvhiringidza kuti ruve pfungwa dzako, uye kana iwe ramba uchishanda nesimba, iwe uchafanirwa nekusangana ne 'budiriro.' Zvinogona kutora nguva, asi iwe haufanire kunge uchikanda mapfumo pasi. Bata moyo murefu wako uye zvinhu zvichawa munzvimbo dzadzo dzese.
Tenda Muna Mwari Quotes
Tenda Mune Zvishamiso Quotes
Tenda Mauri Quotes
Tenda Quotes Pfupi
Hapana Chisingakwanisi Quotes
China Kukurudzira Quotes
Usamirira mukana. Gadzira iyo. - Hazvizivikanwe
Tinowanzomirira nguva yakakodzera. Zvisinei, hapana chinhu chakadai seyakakodzera nguva…
Iva akanaka zvakakwana kuti ukanganwire mumwe munhu, asi usave benzi zvakakwana kuvimba naye zvakare. - Hazvizivikanwe
Kana iwe uchiziva kuti mumwe munhu akakubira chibharo kana kukutengesa, zvakakosha kuti unzwisise kuti iwe…
Rimwe zuva, iwe unenge uchingova ndangariro kune vamwe vanhu. Ita zvaunogona kuti uve akanaka. - Hazvizivikanwe
Rimwe zuva, uchave chingori chiyeuchidzo chevamwe vanhu, uye ichokwadi kwazvo. Handina kuziva…
Hukama hwakanaka hwakakodzera kumirira. - Hazvizivikanwe
Zvakanaka, rudo ndechimwe chinhu chatinogara tichishuwira. Kutaura zvazviri, ndicho chinhu chakanyanya kukosha…
Kuganhurirwa kwako - ingori kufunga kwako chete. - Hazvizivikanwe
Tinoda kufunga kuti mumwe nemumwe wedu ane zvaakatadza. Tinotenda kuti mushure meimwe…